Nofoanana Noho ny Fanafihana ny Lanonam-Panombohan’ny “Kosovo 2.0 Talks Sex” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2012 9:43 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Shqip, Español, English
Nikasa ny hamoaka pirinty ny votoaty iray hafa ny Kosovo 2.0, habaka ahitana bilaogy ifanakalozan-kevitra, lahatsoratra sy haino aman-jery, mivoaka tamin'ny teny Albaniana, anglisy ary Serba. Kosovo 2.0 Talks Sex no anarany ary nokasainy ny havoaka 14 Desambra teo izy io. Anisan'ny lohahevitra novoaboasana ny fiainan'ireo LGBT (nanova na mpitia mitovy fananahana aminy na pelaka koa) any Kosovo sy any amin'ny faritr'i Balkana, ny fifanaovana fotoana, ny fanabeazana ara-pananahana, toera-pandidiana fanovana karaza-pananahana any Belgrade, sy zavatra hafa maro dia maro.
Saingy indrisy moa fa fotoana fohy monja taorian'ny lanona-panombohana, dia nisy andian-dehilahy eo ho eo amin'ny 20 eo niditra tao amin'ny nanatontosana ny lanonana tao Pristina, nandrava ny sehatra ary nidaroka ny iray amin'ireo mpiasa. Nofoanana ny lanonana. Azonao jerena ato ny lahatsarin'ny fisian'izany fanafihana izany.
Namoaka fanambarana ao amin'ny pejy Facebook-ny ny Kosovo 2.0 taorian'ny zava-nitranga:
Ry mpamaky sy naman'ny Kosovo 2.0 hajaina:
Hanome anareo rehetra ny fandehan'ny zava-nitranga omaly izahay, ary hanazava ny antony nanafoanana ny lanonam-panokafana. Andro iray mialoha ny lanonana, nanomboka nahazo hafatra fandrahonana sy fankahalana teto amin'ny pejy facebook izahay. Ny marainan'ny andro hanatontosana ny lanonana, natolotray ny polisin'ny Kosovo ireo hafatra fanehoan-kevitra azonay ary nangataka ny polisy hiambina tao amin'ny Ivo-toeran'ny Tanora (Boro Ramizi) mandritra ny andro izahay. Azonay ireo polisy hiandraikitra ny fiambenana. Manodidina ny tamin'ny 6 ora hariva teo, nisy vondron'olona 20 teo ho eo nirohotra tao amin'ny Efitra Menan'ny Ivontoeran'ny Tanora. Tsy namaly ara-potoana ny polisy. Vokany, nanimba ny sehatra sy nidaroka ny iray amin'ny mpiasa ato aminay ry zalahy ireo. Azonao jerena ato ny fizotran'izany azo an-tsary. Mbola nametraka ny fotoa-pamakiana lahatsoratra ho amin'ny 7 ora hariva hiany izahay.
Taorian'ny zava-nitranga tamin'ny enina ora hariva, natsoina hoe eo amin'ny toeram-pihaonana ny hery manokan'ny polisy. Tokotokony ho tamin'ny folo ora sy sasany alina, atsasakadiny mialoha ny fanombohan'ny lanonana, nisy andian'olona manao fihetsiketsehana mihoatra ny zato indray nanatona ny tranobe fanorenana, miantsoantso hoe “Miala ny pede!” sy ny “Allah u akber!” Na teo aza polisy, nanapa-kevitra izahay ny tsy ho voantohintohina toy izay hampidi-doza ny ekipa sy ny nasaina ao anatin'ny efitra fanaovana lanonana. Tsy maintsy navoakan'ny polisy tsikelikely izahay mba tsy hanao endrika fihantsiana amin'ireo tangoron'olona.
Tao anatin'ny fandaharam-potoananay ny fijerena sarimihetsika roa sy tafatafa isan-karazany, ny fifampiresahana amin'ireo mpandray anjaran'ny gazety-boky, ary fotoana ahitana mozika sy fisotroana ary fandihizana.
Ny zava-nisy omaly alina no tena mampiseho indrindra ny fananana fisainana malalaka sy mahay mamakafaka. Asehon'ny fihetsiketsehana fa tandindonin-doza eo anatrehan'ny herisetram-pivavahana, fanaovana jiolahimboto ary ny fahateren-tsaina ny zon'olombelona fototra indrindra. Nahavita ny iraka nampanaovina azy ny Kosovo 2.0 tamin'ny fanadihadiana ny resaka manodidina ny fananahana eto Kosovo sy manerana an'i Balkana, ary mino izahay fa dingana lehibe amin'ny fanaovan-gazety eto amin'ny faritra iny. Mankasitraka indrindra ny fanohanan'ny mpanohana sy ireo niaraka taminay mandra-pahatapitry ny alina izahay. Matokia fa tsy maintsy hiteny manoloana ny tsy rariny, ny fankahalana ary ny fitsarana an-tendrony izahay na oviana na aiza ahafahanay manao izany.